महानायक राजेश हमालले चिया पसल सुरु गरे ! हमाल चिया पसल”पिउनेक ओइरो (भिडियोसहित) – Tufan Media News
महानायक राजेश हमालले चिया पसल सुरु गरे ! हमाल चिया पसल”पिउनेक ओइरो (भिडियोसहित)
१ पुष २०७७, बुधबार १४:३२
काठमाण्डौं ।नेपालका चर्चीत महानायक राजेश हमाल, एउटा चिया पसलमा देखिएका छ्न । आ’र्टिस्ट खब’रले लिएको अन्तरवा”र्तामा उनी चिया पसलमा भेटिएका हुन । उक्त चिया पसलमा हमाल आफैंले चिया बेचेको देख्न सकिन्छ । हमाल चिया पसल राखिएको उक्त चिया पसल अहिले सामा’जिक संजालभरी भाइ’रल भइरहेको छ। भि’डियो अन्तिममा छ स्क्रोल डाउन गर्नुहोस.!
यो पनि ,,,,नायक रा’जेश हमाल बिहिवारदेखि ५२ वर्षमा लागेका छन् । वि.सं २०२१ साल जेठ २७ मा तानसेन पाल्पामा जन्मेका नायक हमाल चलचित्र ‘युगदेखि युग’सम्म’ वाट अभिनयमा प्रवेश गरेका थिए।
आफ्नै मामा स्व. दीपक रायमाझी निर्देशित चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’वाट फिचर फिल्ममा प्रवेश गरेका हमालले पहिलो चलचित्रवाटै अत्याधिक चर्चा पाए ।अभिनयमा प्रवेश गर्नुअघि भारतवाट प्रकासित फेशन नेट म्यागजिनमा उनले फोटो शेसन गरेका थिए भने काठमाडौमा सम्पन्न केहि फेशन शोमा र्‍याम्प मोडलिङ समेत गरेका थिए ।
१७० बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका हमाल पछिल्लो समय अभिनयमा त्यति सक्रिय छैनन् । एक समयका सर्वाधिक चर्चित नायक मानिने हमालका तारिफ पाउने खालका चलचित्र सार्‍है थोरै छन् ।वर्षमा १६ वटा सम्म चलचित्रमा काम गरेका हमालले धेरै निर्मातालाई धनी बनाए होलान् । तर, समिक्षकको नजरमा उत्कृष्ट हुन निकै गार्‍हो पर्‍यो ।
उनले काम गरेका राम्रा चलचित्रको सूची असाध्यै छोटो छ । राजेश हमालले काम गरेका अधिकांश चलचित्रमा उनी गरिब गाउँले यूवकको भूमिकामा देखिएका छन् । ‘युगदेखि युगसम्म, देउता, वसन्ती, अल्लारे’ लगायतका चलचित्र राजेश स्वयंम आफूलाई पनि मनपर्ने बताउँछन् । उनले अभिनय गरेका चलचित्रको व्यापार कमजोर हुँदा पनि उनको करिअरमा असर परेन । फुर्सदको बेला किताब पढ्न रुचाउने हमाललाईे ‘बिद्धान नायक’ को रुपमा पनि चित्रित गरिएको पाइन्छ ।
काठमाडौमा होस् वा का’ठमाडौ बाहिर सुटिङमा जाँदा उनको साथमा पुस्तक कहिल्यै छुट्दैन थियो । वर्षको एकपटक घुम्न भन्दै अमेरिका वा बेलायत जाने गरेका हमालले फर्केर आएपछि पनि पुस्तककै कुरा गर्थे ।
एक समय नाउक हमाल र नायिका करिश्मा मानन्धरको ‘रिललाईफ रोमान्सको निकै चर्चा हुन्थ्यो । ‘ढुकढुकी, अल्लारे, यो मायाको सागर, साथी, बसन्ती’ लगायतका चलचित्रमा उनले करिश्माको जोडी बनेर अभिनय गरेका छन् ।केही महिलाहरुसँग उनको नाम जोडिएपनि उनको प्रेमप्रसंगको चर्चा त्यति भएन । ५० वर्षको उमेरमा उनले मोडल मधु भट्टराईसँग प्रेमविवाह गरेका थिए।